Si aad uga sii gudubto tartankaaga vaško kasta, waxaad u baahan tahay inaad si firfircoon u koreyso oo aad u hagaajisid blogkaaga.
Waxaa jira arrimo badan oo abuuraya blog blog. Isticmaalka macluumaadka saxda ah ee saxda ah, xulashada qalabka ugu fiican, iyo isticmaalka istaraatijiyadaha ugu fiican dhammaantood waxay saamayn ku yeeshaan sida uu uugu guuleysto blogkaaga.
1.1 1- „Kalfadhiyo“ / „Isticmaalayaal Cusa“
1.2 2 – „Waddooyinka Gaadiidka“ / „Soo-gudbinta“
1.3 3 – „Heerka“ atšokimas
1.4 4 – „Waqtiga Waqtiga ee bogga“
2 „Xeeladaha“ 1: Ogow Dhegeysigaaga Sifiican
3.0.3 3. Ballaarinta maaddadaada (halkii aad ka abuuri lahayd hadallado cusub turėjo iyo jeer)
4 3 taktika: „Isu ururi miro yar oo hooseeya“
5 „Xeeladaha“ Nr. 4: Dhis liis, ururin el. Pašto adresai – boo boodayaasha
6 „Xeeladaha“ # 5: „Ku Saabsan Bogga“
6.0.1 Fikradaha # 1: Hoggaamiya kore fur furran oo aqriya akhristaha.
6.0.3 „Fikirka“ 3: „La wadaag taariikhdaada“.
7 „Xeeladaha“ 6: Hagaaji bartaada muuqaal ahaan
7.0.1 1 – „Naftaada samee“
7.0.2 2 – „Kireyso naqshadeeye xor ah“
7.0.3 3 – „Pixabay“ (ama buugyo kale oo bixiya sawiro qurxoon)
7.0.5 „Tusaale“ Nr. 2: „Isticmaal naqshad fudud si loo yareeyo wax-qabadka“
7.0.6 „Tusaale“ 3: Isticmaal waxyaabaha yaryar ee ku jira bogga ugu sareeya ee navigacija
8 8 taktika: Hagaajinta mashiinka bogga ee bogga
8.1 „Kordhinta radijo radijo radijo ryšio radijas“ 321% pridedamas prie „SEO“
9 „Talooyin“ # 9: „Akhri qoraalkaaga“
10.0.3 3. Ku beddelashada „Twitter“
11 „Xeeladaha“ Nr. 11: Abuūro pelkės centras „ah oo muuji waxyaabaha aad ka kooban tahay“
12 „Xeeladaha“ Nr. 12: „Hagaajinta xawaaraha raritaanka goobta“
12.1 „Qalabka lagu tijaabiyo“
13 „Xeeladaha“ Nr. 13: „La xiriir dadka kale ee aad lacagtaada ku jirto“
Qaabkayagu wuxuu la yahay "Kaizenas" – ereygu badanaa wuxuu tixraacayaa habdhiska tirakoobka kaasoo hagaajiya tayada dhankasta oo ganacsi ah (asal ahaan, vaškas soo saar). Waxaan diirada saari doonaa adeegsiga xogta / cabbiraadaha websaydhada gaarka ah si aan u qeexno vaškas qabadkeena.
Qaar ka mid ah talooyinka aan soo sheegay waxay u baahan yihiin dadaal aad u yar waxayna abuuri karaan natiijooyin deg deg ah oo dag dag ah; halka kuwo kalena ay ku qaataan waqti badan iyo xirfado si a d u dhammaystiraan Waxay u egtahay ciyaarista ciyaaraha fiidiyowga RPG – heerarka qaarkood way fududahay halka qaarna qaadanayaan uabaa daibaa daibaa daibaa daibaa daibaa daibaa daibaa daibae daibae daibai daiyi daiyi daiyi daiyi dari.
Waan ognahay in the xogtu a muhiim tahay in the qiyaaso horumarkaaga iyo inaad wanaajiso horumarinta barashada.
Marka ugu horeysa, warbixinta „Google Analytics“ „waxay noqon kartaa mid xad dhaaf ah“. Tirooyin badanas! Oo waxaa laga yaabaa inaadan aqoon u lahayn qaar ka mid ah metrics ama fikradaha.
Daacadnimo uma maleynayo inay dadka vaškas qorayaasha ah inay waqti badan ku bixiyaan majaajilidda warbixinnada „Google Analytics“.
Sidaa darteed, waxaan soo jeedinayaa kaliya farar lambarrada Google Analytics and the sociaan. Halkaan waxaa ku qoran iš tolo lambarradood oo muhiim ah oo ku jira Google Analytics in baqshiishe kasta – iyada oo aan loo eegin baaxada blogka ama nuuga aad ku jirto – waa in uu fahmo oo isha ku hayaa.
1- „Kalfadhiyo“ / „Isticmaalayaal Cusa“
Autorius: „Qeexida Google“: Kalfadhi waa koox is-dhexgal ah oo ade adeanaanayo shabakadaada internetka kaas oo ka dhacaya wakhti cayiman.
Bal qiyaas in kulan uu yahay weelka loogu talagalay ficilada uu qofku ku qaato blogkaaga. Weelka waxaa ku jiri kara aragtiyo badan oo pelkė iyo dhacdooyin iyo ficillo.
„Fahmaan in farqi we we u dhexeeyo fadhiga iyo isticmaalaha warbixinta Google Analytics“.
Faahfaahin sahlan (faahfaahin dheeraad ah oo faahfaahsan, akhri tan) tan waa tan: Adeegsaduhu waa qof ku yimaada boggaaga oo akhriya waxyaabaha aad ka kooban tahay. „Kelių degalų ayaa ku duubi kara kalfadhiyo badan maalintiiba warbixinimasda Google Analytics“. Tusaale ahaan, haddii isagu / iyadu aima timaado goobtaada aqri dhowr baloogyo ah oo ah 8am aroortii oo ku soo noqo mar kale ka dib kada qadada 13:00 – taasi waa labo fadhi oo duuban.
Raadinta inta jeer ee koorasyada / isticmaalahaaga blog-kaaga ay tahay hal dariiq oo lagu cabbiro koritaanka. Haddii dienoraštis-Kaga uu ku kordhiyo kulamo ka badan tan ka hor, markaas hubaal waa inaad saxeysaa wax sax ah.
Jei esate „Google Analytics“ informacijos suvestinė, informacijos suvestinė> Qaadashada> Guudmarka.
2 – „Waddooyinka Gaadiidka“ / „Soo-gudbinta“
„Kooxaha“ „Google Analytics“ oo koo žuvų duvanos, socia ayaa kala duwanos, kawaangu caansan waa Raadinta Bixinta, Raadinta Dabiiciga ah, Tooska, Bulshada, Soo Gudbinta, iyo wixii la mid ah.
Intos badan ereyadani waa is-sharaxaad marka laga reebo:
Ereyga "Kreipimasis" waxaa loola jeedaa booqdayaasha ka imaanaya xiriirada bogagga kale;
"Tiesioginis" waxa loola jeedaa dadka isticmaala boggaaga adigoo ku qoraya cinwaankaaga internetka ee cinwaanka cinwaanka.
Si aad u hesho lambarrada, „Google Analytics“, informacijos suvestinė> Qaadashada> Dhammaanas Wadooyinka Gaadiidka>.
Ma jiraa goob ama blog’as oo ka soo jeeda meerkee bulsheed ee u diraya taraafikada ugu badan ee bloggaaga? Miyaad heleysaa badanaa baariida bini’aadamnimada (nasiib ku yeelatay?) Dammaanad noocee ah ayaa baaba’day illaa intii baabuurta la maro?
3 – „Heerka“ atšokimas
Heerka soohaanta ayaa ah cabir wanaagsan oo, kur jūs galite gauti mawduucaaga ama tayada gaadiidka:
Haddii guusha aad blogku ku xiran tahay dadka isticmaala bogga in ka badan hal bog – tusaale ahaan, dadka isticmaala vaxay booqdaan boggaaga "pradėti čia" waxayna u maleynayaan in guyinayaan isku xirnaanta akhriskaaga kale, ka dib, haa, heerka sare u kacda xun.
Hase yeeshee, waxaa jira xaalado kale oo oo heerka sare u kacda. Tusaale ahaan haddii boggagaaga ku xiran yahay dakhliga saamileyda ah, ka dibna qiimaha sare u kacaya waxaa laga yaabaa inuu yahay wax fiican – isticmaalayaashaagu waxay booqdaan bartaada, guji xiriiriyaasha xiriirka,.
Ma jiraa isku-xire sawir jaban? Miyuu websaydka ku riixayaa xoogaa dheeraad ah? Miyuu nidaamsan yahay nidaamku ku habboon yahay? Viskas, ką jūs galite pamatyti, kai jūs esate labai blogi, ir vėl atidėkite?
4 – „Waqtiga Waqtiga ee bogga“
„Gal Gal Google Analytics“, informacijos suvestinė> Dabeecadda> „Nuxurka Goobta“> Dhammaan bogagga.
„Muddada loo yaqaan“ Gooman “, Yoolalka Google Analytics„ ayaa cabiraya sida ugu habboon ee balooggaagu u gaaro himilooyinka aad higsaneyso “.
Booqo oo akhri gabalas vagu lagu qoro boggaaga, ama
Dejinta Goolasha ee „Google Analytics“ – tai žinok, kad tu kali talineysaa haddii aad akhrisatid si aad uga gudubto barashada barashada.
Hadafyada ir habboon loogu qoondeeyey waxay and ogolaaneysaa „Google Analytics“ yra jums žinomi kaip maklamumaad muhiim ah, sida tirada isbarbardhigga iyo qiimaha bedelka ee boggaaga – taas oo.
Waxaan ka wada hadli doonaa waxyaabo badan oo, kai saabsan sida Yoolalka loo adeegsado .
„Xeeladaha“ 1: Ogow Dhegeysigaaga Sifiican
Yea yahay dhagaystayaasha aad, dhab ahaantii? Waa maxay da’da guud? Waa maxay heerka waxbarasho ee ar leeyihiin? Muuqaal kasta oo dhaqameed leh?
Ar jūs matote, kaip jūs kalbate: „MAXAA MA“, jei norite „goobtaada“? Sidee ayaad ugu wanaagsanaan kartaa inaad u adeegto?
Waa kuwan seddex siyaabood oo dainos ogaanayo dhagaystayaashaada si ka wanaagsan.
Ka bilow dadka aad taqaan, ka dibna ku sii balaarin magaca magacyada naftaada. Uruurinta macluumaadka, sameeyaan tirakoobyada iyo garaafyada. Sida tinklaraštininkė, waxaad ka heli kartaa sahammo iyo ra’yiga qalabka waxtarka leh ee gacanta. Diiwaangelinta dhagaystayaashaada blogka waxay kaa caawineysaa in la go’aamiyo naafanimadaada.
Isticmaal codadka, sahaminta iyo wareysiyada si aad u ogaatid cidda wax akhrisa iyo sidoo kale kuwa yaqaana akhrinta – da’dooda, garsooreyaasha, shaqooyinka, danaha, lugaha nolosha, iwm. Ku marti inay kula soo xiriiraan oo naftooda baraan oo tai ka haslaan waxa jey yihiin bloggaaga. Maxay u doorteen inay raacaan? Waa maxay noocyada kala duwan ee tu yihiin kuwa ugu cadcad? Maxay adiga iyo mawduuca adiga kugu kalifayaan in kuugu kalsoonaadaan indhahooda?
„Waxaa jira faahfaahin badan oo ku jira boggaaga Facebook“ (Waxaan u maleynayaa in aad haysato mid ka mid ah blogkaaga, haddii aanad tagin hal asap). Waxaad ubaahan tahay inaad ogaato meesha aad ka heli karto.
Tag Sheekooyinka Mustaqbalka ee „Facebook“, „x x boggaaga si aad u ogaato wax badan oo“ saab „dahadatayaashaada“: da’da iyo jinsiga, bogagga ay jecel yihiin, iyo iibsashada online (JAV kaliya).
Žiniatinklio valdytojo pasaulis „Talo-siinta Webka“ „waa laba tusaalayaal ah oo ku saabsan sida golaha niša uu kur čia karo qadar macquul ah oo vaškas lagu garto si loo fahmo waxa dadka shaqadayda ka walaacsan.
Hal digniin ah ka hor intaanad rajeyneynin inkasta oo kale – ha u oggolaan in baqshaddu kaa joojiso hadafyadaada. Istaraatiijiyadu waxay martigelinayaan wanaagga Iyo tufaaxa Xun EE saldhigga isticmaalaha, markaa hubso inaad Kala xayeysiiso wixii iš Wiktionary Ah oo aan Ku habooneyn oo keliya oo diiradda saaro waxa muhiimka Ah – gaar ahaan mawduucyada asaasiga Ah EE caawimaadda codsiyada, maaddaama AY Ku siiyaan qalab asaasi Ah SI AAD ugu qorto qayb jawaabta ah.
Waxa ugu horreeya ee la sameeyo waa in ogaado vaksa ka shaqeynaya iyo waxa aan ahayn bloggaaga.
„Tusaalahan soo socda“ (angl. Angl. Sawirka hoose), „Heerka Isbeddelka“ „Ujeedada loogu talagalay“. „Facebook“ mobilusis „Google“ srauto srautas yra žinomas kaip 7x ir 20x. Waxa aan halkan ku sameyno waa in aan ku dadaalno dadaal, waqti, iyo lacag si aan u helno gaadiid ka badan labadaas ilaha.
Siūlome nemokamą internetinę tinklaraštį, „Google Analytics“ informacijos suvestinę> Qaadashada> Dhamaanas Gaadiidka> Isha / Dhexe.
„Haddii“ už 50 USD / bishii kharashka ku bixiso adoo isticmaalaya barta Twitter-ka ee keenaya gaadiidka badan, waxay ku bixiyaan $ 100 / bishii waxayna gaaraan dad badan.
3. Ballaarinta maaddadaada (halkii aad ka abuuri lahayd hadallado cusub turėjo iyo jeer)
Mowduucyadee ayaa ir muuqda inay ugu caansan yihiin akhristayaashaada? Ar tu dari kartaa macluumaad dheeraad ah boostada? Noqo vaškas hal-abuur ah – wareysi khabiir xirfadeed, ku dar jaantusyada cusub, sameynta fiidiyaha fiidiyowga, iyo wixii la mid ah. Furaha ayaa ah la xoojiyo guuleystayaasha oo ka dhigo kuwa ugu fiican iyaga.
Isticmaalayaasha waxay waqti badan ku bixiyaan boggaan (lambarrada hoos ku qoran). Miyaad ballaarin kartaa waxyaabahan kuwaas oo siinaya heerka ugu wanaagsan ee ka qaybqaadashada? Jei turite „Google Analytics“ informacijos suvestinę, skaitykite ją geriau> Habdhaqanka> Mawduucyada Mashruuca> Dhammaan boggaga.
3 taktika: „Isu ururi miro yar oo hooseeya“
Miro yar oo midabkiisu yar yahay waa mid sahlan in la soo gooyo geed miro ah, nasiib wanaagna bogagga intarnetka intiisa badani waxay leeyihiin miro yar oo lakala saaro sidoo kale. Hawlaha asaasiga ah ee aad sameyn kartid daqiiqado yar maalintiiba waxay gaunayn weyn ku yeelan kartaa guusha guud ee boggaaga.
Paskelbta IFTTT žinutė, kurią reikia sužinoti daugiau apie dieną, dienos bėgyje, dienoraščio „warbaahinta bulshada“.
Ku rakib nidaamka saddexaad ee faallooinka, sida Disqus. Tani waxay kor u qaadi doontaa heerka isticmaalka saamiga.
Tas pats tijaabooyin A / B ah si aad u ogaatid sida vaškas kasta oo ka socda nalalka loo yaqaan "Raginimas veikti".
Calaamadee khayaali, khaladaadka naxwaha, iyo qoraallada ku jira bartaada. Ma jiraan vaškas barta blogka ka muuqata mid aan aqoonta u lahayn ka badan inta badan iyo qaladaadka joogtada ah ee aaggan.
„Wicitaankaaga ugu yeerista ficilka“ (CTA) sida ugu macquulsan. Ku dhaji erayada sida "guji halkanas" leh amaro xooggan sida "hel ebook bilaash ah."
Hubso yra jiraan isku dheelitirnaanta u dhaxaysa sawirada iyo qoraalka, laakiin sawiradu waxay ku xiran yihiin boostada.
Xaqiiji jajabyada jajaban. „Waxaad rakibi kartaa plugin oo“ ir „sahlan kuu“, kaip „hesho xiriiro jabsan oo“, jei jūs galite gauti dienoraštį-WP.
„Xeeladaha“ Nr. 4: Dhis liis, ururin el. Pašto adresai – boo boodayaasha
91% dadka waxay calaamadeeyeen sanduuqyada emailkooda geriausi kasta.
Atgal į viršų „Facebook“, „Halkaasoo boostadaada“ „yaabo inay“ riixdo quudinta wargeyska oo Dhan Buuq.
„Xiriir joogto ah“
Intaa waxaa sii dheer, waxaad ubaahan doontaa inaad isticmaasho foom ka-xulasho ah oo xirfad ahaan loogu talagalay, sidaa padaryta su’aal kama taagna inuu isticmaaleha iska diiwaangeliyay liiska dirista. Waxa ugu dambeeya ee aad rabto ayaa ah in laguugu eedeeyo in aha khaarijinayso kuwa ku jira liiskaaga boostada. Qaar ka mid ah aaladaha liiska emailka ee aan kor ku soo xusnay ayaa leh qaabab ku-dhicis ah ama waxyaabo la mid hoo ku dhex jira baloogyadaaga.
Mid ka mid ah farsamooyinka cusub ee [liiska dhismaha] ayaa isticmaalaya ‘kategorijos tikslinės pasirinktys’.
Waa fikrad, viduryje ah, kai kartąhiyo casriyeynta, hase yeeshee būdas fududahay la maareeyo.
Tusaale ahaan, haddii aad dienoraštis ku saabsan tahay cunto, waxaad bixin lahayd ‘hogaamiya magnetas’dadka ir akhri qaybta ku saabsan cuntooyinka cuntada ka badan kuwa aad daawaneysid qaybta cuntada quraacda.
Waa waxa aan u isticmaalnay JK Linkologija ir korupcija qaado saxeexyada emailka ee ka sarreeya 300%:
„Waxaa lagu rakibay hogaamiyayaasha“ klestėjimo laidų įskiepis „WordPress kaas oo bartilmaameedsan kara foomamka xulashada gaar ah
Nidaamyada la doorto si dihirrigeliyo magnetas kasta oo hogaamin ah (waxaan diirada saarnay dhinacyada, hababka iyo foorjada)
Furaha halkan waxaa weeye in la soo bandhigo muraayad jilicsan oo si dhow ula xiriirta waxa qofku vaškas akhrinayo waqtigaas.
– Adamas Connellas, Adamas Connellas, pirmąją dieną.
„Xeeladaha“ # 5: „Ku Saabsan Bogga“
Fikradaha # 1: Hoggaamiya kore fur furran oo aqriya akhristaha.
Geltonųjų lapų plaktukai waxaan ku dhufaneynaa akhristaha boggan boggooda: "WAXYAABAHA SIYAASADDA IS-BIXIYEYSIGA SIYAASADEEDKA AH, waxaanu aaminsanahaya in si khaas ah u socdaalka safarka, nabarada, cunto fiican, saaxiibo wanaagsan, wadahadal dheer, balaarin balaaran + maskax." Šonas u caawin kartaa laakiin akhriso?
Siddeed Saacadood Maalinta waa mid the mid ah mid tusaaleyaal website kaas oo si wanaagsan u sameeya. Waxay ku bilaabataa "Sveiki! „Waxaan nahay“ Nathanas Strandbergas ir Katie Kirk … "Tilmaamaha xooggan, wada sheekaysiga ayaa ka jiidanaya akhristaha.
„Fikirka“ 3: „La wadaag taariikhdaada“.
Jūsų puslapis apie jūsų internetinę svetainę yra „noqoto mid ka tarjumaya bayaanka ganacsigaaga iyo shakhsiyaddaada“. Tas pats xiiso iyo akhristayaashu waxay dareensan yihiin sidii ay ku ogaanayaan heer shakhsiyeed.
„Xeeladaha“ 6: Hagaaji bartaada muuqaal ahaan
„Waxay qaadataa qofka caadiga ah Saacadaha“ – 0,05, jei ji yra tokia pati kaip „xukun ku saabsan boggaaga“. Taasi waxay u tarjumaysaa 50 magaalo and a dhigto rikoodh wanaagsan marka hore booqdahaaga. Per 50 milisekundžių waa ​​shaki ku jiro qofku wuxuu haystaa waqti uu ku aqriyo qoraalkaaga. Taasi micheheedu waa maxay? Taasi macnaheedu waa inta badan aragtida dadka ee internetinė interneto programa waxaa lagu sameeyey qaabka iyo sawirada, taas oo maskaxdu ay ka dahaso badan tahay qoraalka.
1 – „Naftaada samee“
Iyada oo leh ilo badan oo bilaash ah iyo codsiyada websaydhka ee internetka, būdas sahlan tahay inaad naftaada ku abuurto sawirro yaab leh – xitaa hadaadan ahayn xirfadle naqshadeeye xirfad leh.
Ma rabtaa garaafyada asalka ah ee boostadaada soo socda? „Samee naftaada adiga oo raacaya talaabooyinkan“:
Raadi sawirro bilaash ah iyo fanka fanka WHSR piktogramos, „Isticmaalaha Calaamadaha“ arba „Freepik“,
„Tusaalaha“ – „Abuuritaanka muuqaalka“ „Facebook Post Post“ paskelbė nemokamą „Tifaftiraha“ nemokamo projektavimo vedlį. „Qalabku wuxuu bixiyaa in ka badan“ 17 000 naqshadeynta naqshadaha iyo sawirada 1 200 000 ee diiwaankooda – riix halkan si aad u tijaabiso.
„Fiiri shaashadda oo“ ir GIF sawirrada. „Qalab lacag la’aan ah“ – „ScreenToGif“ („Windows“), kurį tu dainai („Mac“).
„Muunad“ – „Sawirka GIF Waxaan sameeyay the boostada shaqsiyadeed ee boostada isticmaalaya ScreenToGif.
2 – „Kireyso naqshadeeye xor ah“
Hadday tahay garaafka sawirka iyo sawirku runti maahan shay, waxaad turėjau tave jeer shaqada, tagi kartaa naqshadeeye madax-bannaan.
Qiimaha naqshadaha sawirka iyo websaydhka ayaa si aad ah hoos ugu dhacay sannadihii ugu dambeeyay iyada oo ugu wacan tahay barnaamijyada bilaashka ah iyo tartanka kulul. „Iyada oo ku saleysan daraasaddayddii dhowaanta ahayd – naqshadeeye ayaa ku dallaca qiyaastii $ 26 / saacaddii oo iskucelcelis ah oo waxaad u bixi kartaa ugu hooseeya $ 3 / month.
Xayeysi ma aha: Chee Ching waa qofkeyga go aankeyga markii aan u baahdo adeegyada naqshadeynta xirfadleyda. Iyadu waa naqshadeeye "buuxa" ah oo la yimid hibo aad u sarreeya iyo caqli ganacsi – „Kuguma talin karo iyada in fi filan“.
„Kharashka“ internetinė svetainė – ka iyo qaabeynta garaafka oo up salean qaababka „Upwork Top 100 freelancer“. Celcelis ahaan saacaddii saacadiiba = 26,32 USD / saacad; ugu sarreeya = 80 USD / saac, ugu hooseeya = 3 USD / mėn (Ilo).
3 – „Pixabay“ (ama buugyo kale oo bixiya sawiro qurxoon)
Haddii nėra reikalingas, kai darto sawirro aan ku habboonayn boostadaada – ugu yaraan waxaad sameyn kartaa waa inaad ka fogaato sawirro naxdin leh. Ma aha oo kaliya inay yihiin qaylo-dhaan iyo wax-u-duwanaansho, laakiin waxay u muuqan karaan goobo badan oo kale waqti kasta oo la bixiyay, taasoo ka dhigaysa in boogtaada ay u muuqato kuwo ka duwan.
Waxaa jira Tilmaamaha sawirka lama tirin karin halkaad ka heli karto bilaash, sawirro yaab leh. „Pixabay waa kan aan ugu jeclahay dabacsanaantiisa susijaudino. Ma jiraan baahiyo tilmaamid, taas oo macnaheedu yahay inaad ku sameyn karto vaškas kasta oo aad rabto kana mid ah sawirrada aad ka hesho halkaan.
Intaa waxaa dheer, waa sahlan sahlan in la isticmaalo – waxaa jira xitaa raadinta sahlan ee bogga hore ee aad heli karto kahor xataa xitaa galaan. Waxaad heli doontaa sawirrada, sawirada vector, iyo sawirrada waxayna soo saari karaan marka loo baahdo. Soo-dejinta sawirada dhabta ah waa mid aad u fudud, mar labaadna waxay ku yimaadaan fursadaha sawirka sawirka (pixels iyo MB) si sawirka aad u isticmaali karto uu uu yahay mid cad oo tayo leh vaškas kasta oo ujeedadaadu tahay (kiiskeyga, blog mid aan lagama maarmaan ahayn).
„Tusaale“ – pjūklo lagamino „Pixabay“.
Waa in noqotaa dheelitir banaan iyo waxyaabo kopūstai. Meel Caddaan ah uma baahna inay noqoto midab cad. „Ogsoonow sida Freshbooks“ waxay isticmaashaa meel aan fiicnayn and loo abuuro muuqaal qurux badan. Iska dhig dhambaal bogga. Tirtir waxyaabaha aan loo baahnayn ama u guuri meelo kale. Kordhi booska cad si loo yareeyo buuqa.
„Tusaale“ Nr. 2: „Isticmaal naqshad fudud si loo yareeyo wax-qabadka“
Isticmaalayaashu waa in the diirada saaraan waxa aad ka Buoni shaqo wanaagsan oo diirada saaraya akhristaha ujeedka ujeedada goobta – si aad u heshid inaad ku qorto koonto.
„Tusaale“ 3: Isticmaal waxyaabaha yaryar ee ku jira bogga ugu sareeya ee navigacija
Ka dib waxaad abuuri kartaa qaybaha hoos ku qoran kuwan kuwa waaweyn. Hal tusaale oo muujinaya sida aad ir qabanqaabin karto qaybo badan oo kala duwan ayaa laga arki karaa Amazon.com. Waxyaabaha yra betinayeen qaybaha, sida Buugta, laakiin ka dibna sii kala qaybinta qaybaha qaybaha hoose ee kale si ay kaaga caawiyaan inaad kala soocdo oo aad u heshid shey gaar ah oo aad rabto kumanaan. Haddii aad leedahay qaybo fara badan, iskuday in aad la timaado dhawr qaybood oo muhiim ah. Yaree isticmaalka iššokantys langai. Ugu badnaan ku darso kaliya hal šašadas.
8 taktika: Hagaajinta mashiinka bogga ee bogga
Markaad haysatid qiimaynta mashiinka raadinta fiican, waxaad arki doontaa kororka gaadiidka iyo dakhliga. La qeexo qeexitaanka qotada dheer ee sida loo jaangooyo makiinadaha raadinta raadin kara, inkastoo. Inkastoo yra labai reikalingas, jei norite, kad jūsų horumarinta qodobada bogga (sida helitaanka isku-xirarka) waa mid muhiim ah, waxaa jira miro badan oo miro yar oo SEO ah in badan oo bloggers iska diidan.
„Google ayaa si joogto ah isbeddelaya“ algoritmai, sidaas darteed adkaan kartaa la garto waxa kaliya ee „Google doonayso“. „Waxaa jira saddex arrimood oo“, „aa, oi, oi, aa, diirada saarto haddii aad rabto inaad si fiican ugu roonaato mashiinka raadinta„ Google “: Mawduuca, awoodda waxqabadka, iyo khibrada isticmaalaha.
Dhamaan arrimahan oo Dhan Waxay isu yimaadaan oo isku daraan waxa Google u tixgeliyo "tinklaraštis wanaagsan" oo u qalma darajada sare ee natiijooyinkooda raadinta.
„Kordhinta radijo radijo radijo ryšio radijas“ 321% pridedamas prie „SEO“
Muddadii dhow, waxaan baranayey siyaabaha kor u qaadista taraafikada bani’aadamka oo kaliya iyada oo beddelayo iyo qaabaynta content (SEO puslapyje).
Oo waxaan pranašauja natiijooyin fiican.
„Gaadiidka raadinta“ viduryje vidurio, o ne „boosteejooyinkayga ayaa kordhay“ 321%!
1. Raadi xariiro ka baxsan si aad u balaariso macluumaadkaaga iyada oo macluumaadka dhagaystayaashu xiisaynayaan.
Tusaale ahaan: Maqaalkayga ku saabsan boostada hore ee blog dienoraštis waxaa jira xiriiryo ilo kale oo leh daraasiin fikrado ah dienoraščio įrašai.
Isla markii aan ku daro kodhka si aan ula socdo xidhiidhada la isku diro, waxaan ogaaday in akhristayaashaygu riixaan xiriiriyahan sida waalan. Maxaan sameeyaa? Waxaan kordhiyay mawduucayga fikradaha 57 ee ugu horeeyay ee blogka. Hada haddaba tani waa ereyga ugu caansan ee ugu caansan kaas oo keena inta badan gawaarida Google.
2. Samee Miiska Tusmada haddii aad leedahay wax ka badan ereyada 2000 oo qoran.
„Tani waxay“, „Caawin Doontaa“, į kurį pateko „Hesi xiriiryo Dhakhso leh oo ah SERP“, „Google“, jūsų CTR-Gaaga.
3. Raadi su’aalaha yra weydiiyaan dhagaystayaashaada mowduuca qodobkaada oo ku jawaab.
Waad ka qaadan kartaa su’aalaha Google ee "Dadku sidoo kale waydiiyaan" blokuoti.
4. Isku diena inaad ku darto ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah ee ku qoran H2.
Sida uha dhakhsaha badan ee aan halkaas u joogay, riixitaanka maqaaladayda ee su’aalahan ayaa kordhay 20%!
6. Ar aš tavęs diena prieš vidurdienį buvau nusiteikęs, kai buvau nepagalvojęs, kad buvau padaręs aadan ku faraxsanayn natiijooyinka gaadiidkaaga ee Google.
Isbedelis. Tijaabo! Kur dar lovos žodis cusub.
Sidaas darteed, waxaan kordhiyay taraafikada 321% dėka kuwan fudud ee SEO-ka talaabooyinka.
– Michaelas Pozdnevas, Anigu waxaan ahay Blogger.
Isku xirnaanta gudaha – hubso įpainiojus muhiimka ahi yahay mid si ku xiran gudaha
Adeegso asalka, maqaal waxtar leh oo ka jawaabaya baahiyaha isticmaaleyaasha – „Google Panda waxay ciqaabtaa bogagga leh boggag kooban oo aad u dhuuban“
Isticmaal buqshad xarfaha ah iyo khariidadda bogaga si and a caawiso Google fahamsanaanta qaabka dhismahaaga iyo socodka content
„Isticmaal miis“ turinio turėjo daugiau nei 2000 m.
Tijaabi cinwaanada bogga si aad u hagaajisid bogga natiijada raadinta CTR – daraasad-xaaladeed ayaa muujisay in CTR yra žinomi kaip darajooyinka boggaga.
Hagaajinta heerka kaqaybgalka goobta – taip saar qiimaha iyo waqtiga bogga wuxuu saanudynayaa darajooyinka goobta.
„Talooyin“ # 9: „Akhri qoraalkaaga“
Ku qor majalado iyo cinwaano žarna. „Hubi in bartilmaameedkan muhiimka ah ee aad rabto iyo in the xiiso and leeyihiin inay qabtaan xiisaha akhristaha.
Abuuri fikrado cusub si kor loogu qaado jadwalka hore ee warbaahinta bulshada. „Tusaale ahaan“, „miyaad martigelin kartaa sheekeysi“, „Twitter ah ah oo faa’iideysanaya qaar ka mid ah mawaadiicdaadii hore si aad u bilowdo wadahadal?
Abuuri mawduucyada tavo geriausi pranešimai oo ku saabsan mowduuc gaar ah.
Dib u cusbooneysiiya oo cusbooneysii waxyaabaha aad hore u leedahay vaškas ka sii qiimo badan ka hor.
Ma jirto vaško pluoštas fiicnaantoje, qoraalka wanaagsan uu yahay mid muhiim ah haddii aad rabto inaad la xiriirto dhagaystayaashaada. Laakiin waxa kaliya oo aan ku filneyn lagu wado gaadiidka goobtaada keligiis.
„Waxaad ubaahan tahay inaad abuurto nuxur ah in dhagaystayaashaaga bartilmaameedku inta badan rabaan inay akhriyaan.
Sidee ku ogaaneysaa waxay rabaan inay vaškas akhriyaan?
Dib ugu noqo „Google Analytics“. Soo ogow nooca waxyaallaha aha dhagaystayaashu jecel yihiin. Qeybo noocee ahay wadaagaan ama wadaagaan inta badan? Abuur badan oo ka mid ah mowduucyadaas iyo kuwa ka yar kuwa aan caan ka ahayn (ama dib u celi kuwa kuwa caanka ah) si uga dhigaan kuwo badan sida joornaalada caanka ah).
„Tusaale ahaan“, „Kuwan waa boggeena sare ee 10 ee shabakadaha sirta ah ee lagu soo bandhigay Janaayo 2016.„ Postka “yra paskelbtas„ eooyinka “Facebook ayaa haysta dhagaystayaasha muddo ka badan celceliska. Tani waxay ka dhigan tahay į dhagaystayaashu yra helayaan macluumaadkan faa’iido leh. Dhab ahaantii, waxay 100% waqtiyo badan ku bixiyaan boostadaas marka loo eego kuwa kale. Waqtiga si aad u ogaato waxa ka shaqeeya si fiican u shaqeynaya "stiprintuvas" mawduuca.
Ku dhiiri galiya waxyaabo caan ah oo ku saabsan „Podcast“, „YouTube“ kanalai, „SlideShare“, „iyo wixii la ah“. Tani waa daaqad ku saabsan waxa dadka ku jira ee aad doonayso inaad wax badan ka ogaato. Waxaa jira sabab sababo gaar ah u caan ah waqti kasta oo la siiyay.
Tusaale ahaan, iTunes waxay ir oggolaaneysaa dadka isticmaala inay raadiyaan podcasts ku salaysan caan. U fiirso mawduuca iyo sidoo kale habka loo soo bandhigo dhagaystayaasha.
Isticmaal Youtube si aad u ogaatid waxa soo galootiga ah ee ku jira nuucaaga. Soo ogow fiidiyowyada a caan ku yihiin kan ugu caansan. Diido fiidiyowyada caanka ah ee loo yaqaan ‘dienoraščiai’ fikradiisa.
„SlideShare“ programoje „waxaad tagi kartaa Bogga“ ir „caansan si“, „oaato nooca xayeysiinta“ yra „xiisaha booqdayaasha goobta“.
Tusaalaha nolosha ee dhabta ah: Qorshaha lacagaha loo yaqaan "Planetos pinigai pinigai", ayaa ku xusan sida ugu caansan yihiin.
3. Ku beddelashada „Twitter“
Waa maxay tareenka Twitter? „Tani waxay“ – tai čia, kai jūs turite daugiausiai dėmesio, „rabaan inay“, „vaškas badan ka ogaadaan“. „Maskaxda Ku“ šienas:
Ma aha vaškas kasta ooo so socda Twitter-ku wuxuu ku habboon yahay niša. Xaaska Brad ayaa laga yaabaa inay ka soo baxday Cracker Barrel, laakiin taasi dhab ahaantii waxay leedahay wax walba oo ar kabanabanai ganacsigaaga ganacsiga ganacsiga? Waxaa laga yaabaa in the sameyso haddii aad rabto inaad ka hadasho sida looga adkaado warshadaha warbaahinta bulshada.
„Waxaad“ turėjau vienokius ar kitokius paveikslėlius, o internetinius dienoraščius „yaabo waxa“. Kas yra „Twitter“ tendencijos – „xitaa haddii aysan aheyn wax dhab ah“ niša. Wakhtiga WHSR – qayb ka mid ah koritaankeena wuxuu ka yimaadaa istaraatiijiga mashaariicda ah ee aanu isku darno nuucdeena hoose (internetinė svetainė, rinkodaros Warbaahinta bulshada) oo leh mawduucyo kopūstai oo khuseeya („War of War World“, „Taxha Master“, „Dungeon Master“, „Požemio meistras“ Cisterna, alus-iwm, iwm.). Isku guursashada laba mawduucyo oo aad u kala duwan ayaa kordhiya akhristayaasha oo waxay bixiyaan xaglo cusub oo ku saabsan mawduucaaga.
Meelaha ay dadku weydiinayaan su’aalo mowduuc ah, sida Quora waxay sidoo kale noqon kartaa il wanaagsan oo la arko waxa dadku rabaan inay vaškas badan ka ogaadaan.
„Xeeladaha“ Nr. 11: Abuūro pelkės centras „ah oo muuji waxyaabaha aad ka kooban tahay“
Fiiri qaybaha kala duwan ee bartaada internetka. Ma jiraan vaškas qaybo ah oo ka maqan? Miyaad abuuri kartaa pelkės centrą ah (qaar waxay ugu yeedhaan "bogga qoob-ka-ciyaarka") oo aad ku soo bandhigaysaa waxa aad u wanaagsan ee qaybtaas ah? Ama, lagai yaabee inaad si fudud u rabto inaad muujiso mowduuc gaar ah kuwa kale maxaa yeelay falanqayntaada xogta ayaa muujisay in booqdayaasha boggaagu aad u daneynayaan XYZ.
Sidee hagaa mawduuc gaar ah
„Xeeladaha“ Nr. 12: „Hagaajinta xawaaraha raritaanka goobta“
Vaško yar ka hor ayaanu ka hadalnay muhiimadda waqtiyada xawaaraha ah ee boggaaga internetka iyo sida dadka saboolka ahi noqon karaan. „Helitaanka boodhadhkaaga si aad u dahahso badan u baahan tahay inaad u fiirsato waxyaabo badan oo kala duwan“.
„Qalabka lagu tijaabiyo“
„ShortPixel waxay kaa caawineysaa in ca caadiadiyo oo yareeyo sawirada iyadoon khatar galin tayada muuqaalka. Waxaad awoodi kartaa Ku qor URL-kaaga bogga halkan oo fiiri intere in le’eg waxaad ku cadaadin kartaa sawirradaada muuqaalkaaga ee ShortPixel.
„Xeeladaha“ Nr. 13: „La xiriir dadka kale ee aad lacagtaada ku jirto“
Intos badan hogaamiyaasha dienoraštis waxaad ka heleysaa internetka maanta oo diiradda saaraya hagaajinta qoraalkaaga ama ku darida waxyaabo dheeraad ah.
Si kastaba ha ahaatee xaqiiqadu waxay tahay badane, ama xitaa ka sii wanaagsan, ma aha turėjo iyo jeer jawaabta.
Mararka qaarkood, būdas ka fiicantahay in ay ka fogaato abuurista waxyaabo dheeraad ah oo eadto waxyaabo kale oo aad sameyn kartid si aad u gaarsiiso natiijooyin wanaagsan oo ka soo baxa blogging, Sida isgaadhdainta asxa asxa asxa asxa asxa.
Marka ugu horaysa fikradda, waxa laga yaabaa inaanay u muuqan sida fikrad wanaagsan in lala hadlo dadka kale ee bloggers ku jira. Waxaad labadiinaba u tartamaysaa gaadiid isku mid ah ah Dhan.
Si kastaba ha noqotee, isku xirnaanshaha dadka kale ee saamileyda ayaa dhab ahaantii faa’iido u leh labadiinaba. Waxaa jira gaadiid ku filan oo socda iyo marka tinklaraštininkai yra talinayaan midba midka kale, booqdayaashooda goobta waxay u muuqdaan inay ogaanayaan.
Isku duub oo iskudubaridka kale ee tinklaraštininkai. Labadaba waxaad bartilmaameed u tahay dadka dhagaystayaasha ah, sidaa darytas labadiinaba faa’iido ayey yeelan doonaan. „Waxaad sidoo kale ku xiran kartaa“ tinklaraštininkai ee ku saabsan xiriirka. Tusaale ahaan, haddii aad calaamado alwaax ah sameysid oo aad iyaga ka iibisid, waxaad u baahan doontaa inaad isku xirto blog oo ka hadlaya diyaarka diyaarka.
„Macluumaadka la wadaag“ tinklaraštininkų kale. Ma heshay meel aad ku xayeysiiso taas oo si gaar ah u guulaysatay? Ha ka baqin inaad u sheegto dadka kale. Waxay, markaaba, kuu sheegi doonaan halka ay ku xayeysiinayaan.